Motivation for success :: एनआईसी एसिया बैङ्कले दिएको खुसी
एनआईसी एसिया बैङ्कले दिएको खुसी
प्रकाशित मिति : बिहिबार, चैत्र २४ २०७८
काठमाडौँ – ‘बैङ्क पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि’ यो नारा हो एनआईसी एसिया बैङ्कको । बैङ्कमा खाता खोलेर कारोबार गरेको झन्डै दस वर्षपछि यो नारा मेरो जीवनमा लागु भएको छ । बैङ्कको ग्राहकको नाताले मेरो जीवनमा घटेको एउटा सानो संश्लेषण यहाँ प्रस्तुत गर्दै छु । हुन त यो सामाग्री सम्प्रेषण गर्न अत्यावश्यक त होइन । तर बैङ्कको सेवा विस्तार भएको, सुध्रिएको, अरू बैङ्कहरूलाई पनि आफ्नो सेवा विस्तार गरेर जनतालाई सेवा दिन प्रेरित होस् भन्ने हेतुले यो सामाग्री तयार पारिएको हो ।
कुरा हो २१ चैत्र २०७८, सोमबारको । आइतबार दिउसो मोबाइल बैङ्किङ मार्फत पैसा पठाउन बैङ्कको एप खोलेँ । पासवर्ड बिर्सेको रहेछु । चार चोटि गलत पासवर्ड हानेपछि ब्लक भयो । ब्लक भएपछि नजिकैको शाखामा सम्पर्क गर्न भनेर सन्देश आयो । त्यति आवश्यक नभएकाले खासै वास्ता गरिएन् । समाचार र सूचना खोज्न दौडिन पर्ने भएर होला भोलि पल्टसम्म पनि मोबाइलको पासवर्ड रिसेट गर्ने कुरा याद भएन ।
सोमबार दिउसो १२ बजे ०१–६२०११७८ बाट फोन आयो । सुरिलो स्वरमा महिलाको आवाज सुनियो, नमस्कार ! म एनआईसी एसिया बैङ्कबाट ।
मैले भने, ‘हजुर !’ उताबाट एक धार्नीको प्रश्न तेर्सियो, ‘तपाईँको मोबाइल बैङ्किङ ब्लक भएको हो ?’
‘के तपाईँलाई थाहा छ, आज भोलि एनआईसी एसिया बैङ्कको मोबाइल बैङ्किङको पासवर्ड आफै परिवर्तन गर्न सकिन्छ नि, मोबाइल बैङ्किङ अन ब्लक गर्न सकिन्छ नि ?’, बैङ्कको महिला कर्मचारीले भनिन् ।
‘हो र !’ मैले आश्चर्य मान्दै सोधेँ ।
‘हजुर तपाईँको मोबाइलमा भएको बैङ्कको एपमा जानुहोस् त !’ मान्छे इन्टरनेटको पहुँचमा छ/छैन । कस्तो अवस्थामा छ, के छ कुनै जानकारी विनै उनले निर्देशन दिइन् । मैले पनि इन्टरनेट भए नभएको खासै ख्याल गरिन । उनले भने अनुसारै गरे ।
अन्तिममा अफिस एरिया (विजुली बजार) को विजुल्ली घुम्न गएको रहेछ । काम सफल हुन सकेन । फोनमा कुरा गरिरहेको बेलामा मोबाइल डाटाले काम गर्दो रहेन छ । मेरोमा त इन्टरनेट रहेनछ, अब के गर्ने ? उनलाई नै प्रश्न गरे ।
उनले तुरुन्त जवाफ फर्काइन्, ‘उसो भए टिपेर राख्नुहोस् । नेट आएपछि रिसेट गर्नुहोला, ट्रान्जेक्सन पासवर्ड पनि चेन्ज गर्नुहोला ।’ जिन्दगीका कसैले पहिलो पटक फोनबाट गतिलो काम सिकाइरहेको थियो । त्यही कामका लागि बैङ्कको शाखा कार्यालयमा जान, आउन लाग्ने समय र त्यहाँ हुने लाइनका कारणले अत्यावश्यक नपरी मेरो मोबाइल बैङ्किङ खुल्ने थिएन । आइतबार रोकिएको काम मंगलबार भयो । त्यो पनि कुनै समय नखर्चेर ।
एनआईसी एसिया बैङ्कले मोबाइल बैङ्किङ लगायत अनलाइनबाट हुने कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आईसर्भ (ISERVE) सर्भिस सञ्चालन गरेको रहेछ । उनले मलाई पहिला बैङ्कको एप्लिकेशन खोल्न भनिन् । एप्लिकेशनको लेफ्ट साइडमा रहेको अनलाइन सर्भिसेसमा क्लिक गर्न भनिन् । त्यहाँ आईसर्भ (ISERVE), अनलाइन क्रेडिट कार्ड (Online credit card), ओपन न्यु एकाउन्ट(Open New Account), ओपन फिक्स डिपोजिट (Open Fixed Diposit), मेरो शेयर रिन्यु (Mero share Renew) लगायतका विकल्प खुले ।
उनले आईसर्भमा क्लिक गर्न भनिन् । त्यहाँ क्लिक गर्दा मोबाइल बैङ्किङ सर्भिस (Mobile Banking Services), कस्टमर सर्भिस (Customer Sevices), टेलर सर्भिस (Taller Services), कार्ड सर्भिस (Card Services) लगायत अप्सन खुले । उनले मोबाइल बैङ्किङमा क्लिक गर्न भनेकी थिइन् । त्यहाँ क्लिक गर्दा न्यु रजिस्ट्रेसन (New Registration), रिसेट पिन (Reset Pni) , अन ब्लक मोबाइल बैङ्किङ (Unblock Mobile Banking), ब्लक मोबाइल बैङ्किङ (Block Mobile Banking) खुले ।
मेरो मोबाइल बैङ्किङको पासवर्ड बिर्सिएर ब्लक भएको थियो । अन ब्लक मोबाइल बैङ्किङमा क्लिक गरे । खाता नम्बर, मोबाइल नम्बर र इमेल राख्ने अप्सन खुल्यो । सबै विवरण भरिसकेपछि नयाँ पासवर्ड राख्ने ठाउँ आयो । दुई ठाउँमा नयाँ पासवर्ड राखेपछि मेरो मोबाइल बैङ्किङ फेरी सुचारु भयो । र मैले आफ्नो काम सहजै गर्न पाएँ ।
मोबाइल बैङ्किङ, अनलाइन बैङ्किङ, इन्टरनेट बैङ्किङ सेवा सबै बैङ्कले सुचारु गरेका छन् । यो भन्दा अघि पनि मैले मेरो मोबाइल बैङ्किङ पासवर्ड बिर्सिएको थिएँ । ब्लक पनि भएको थियो । त्यो चोटि म बैङ्कसम्म पुग्न परेको थियो । बैङ्कमा गएर, एउटा फारम भरेर नागरिकताको फोटोकपी राखेपछि मात्र यो सेवा पुन सुचारु भएको थियो । त्यही भएर यो चोटि म तत्काल बैङ्कको शाखामा गइन । जहिले आवश्यक पर्ला, जाउँला भनेर बसेको थिए ।
बैङ्कबाट आफै फोन आएर, तपाईँको यस्तो भएको रहेछ भन्दा आनन्द लाग्यो । बैङ्कको एउटा फोनले मेरो बैङ्कसम्म जाने, आउने र लाइन बस्ने समयको बचत गर्‍यो, त्यसको बदलामा मैले यो सामाग्री तयार पारे ।